सरकारको नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्य – के समाजवाद उन्मूख सम्बन्धी नीति परित्यागनै गरिएको हो ? | Sandhikharkafm.com
मोहन विक्रम सिंह , जेष्ठ १५ गते
यहाँ उल्लेखनीय छ कि संविधानमा समाजवादी राज्यको निर्माणको कुरा नगरेर समाजवादउन्मूख राज्यको निर्माणको कुरा गरिएको छ । ती दुवै शब्दावलीहरूको बीचमा मौलिक अन्तर छ । समाजवाद दीर्घकालीन रूपमा कायम हुने व्यवस्था हो भने समाजवादउन्मूख नीति तात्कालिक न्यूनत्तम कार्यक्रम हो । तत्काल देशमा समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण सम्भव छैन । औद्योगिक विकास भएका देशहरूमा नै समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण सम्भव छ । यो कुरा बेग्लै हो कि त्यस प्रकारको औद्योगिक विकास पूँजीवादी प्रणाली अन्तर्गत हुन्छ वा नयाँ जनवादी प्रणाली अन्तर्गत ? औद्योगिक विकासद्वारा नै व्यक्तिगत वा सानो पैमानाको उत्पादन प्रणालीलाई समाप्त पारेर त्यसका ठाउँमा ठूलो पैमानाको उत्पादन प्रणालीको निर्माण गरिन्छ ।
समाजवादी व्यवस्थाले पूँजीवाद वा औद्योगिक विकासले तयार परेको ठूलो पैमानाको उत्पादन प्रणालीमा सामाजिक स्वामित्व कायम गर्ने काम गर्दछ । त्यही समाजवाद हो । उत्पादन प्रणालीको त्यसरी ठूलो पैमानामा विकास नभइकन देशमा विद्यमान व्यक्तिगत, छरिएको वा सानो पैमानाको उत्पादन प्रणालीमा सामाजिक स्वामित्व कायम गर्नु वा अर्को शब्दमा देशलाई तुरुन्त समाजवादी व्यवस्थातर्फ लैजान सम्भव हुने कुरा होइन, तर समाजवाद उन्मुख दिशामा जानु सम्भव छ किनभने त्यसको अर्थ तात्कालिक रूपमा सीमित रूपमा आर्थिक वा सामाजिक क्षेत्रमा प्रगतिशील नीतिहरू अपनाउने हुन्छ । त्यसरी विद्यमान यथास्थितिबाट केही अगाडि बढ्नु वा आंशिक रूपमा भए पनि आर्थिक वा सामाजिक रूपान्तरण गर्नु सम्भव हुन्छ । तर अहिलेको वक्तव्यको मुख्य कमजोरी के हो भने त्यसले समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि बढ्नको लागि कुनै खास नीति वा कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छैन । त्यसैले त्यो वक्तव्य यथास्थितिवादी प्रकारको नै छ ।
सामान्यतः नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको रक्षाका लागि, विशेषतः भारतीय हस्तक्षेप तथा त्यसले प्रायश नेपालको विरुद्ध लगाउने नाकाबन्दीका विरुद्ध सन्तुलनका लागि उत्तरमा चीनसितको सम्बन्धले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । तर भारतीय दवावमा वा कतिपय अवस्थामा भय र प्रलोभनमा परेर पनि नेपालका विभिन्न सरकारहरूले चीनसितको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने आट गर्दैनन् वा त्योसित भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्न पछाडि रहने गर्दछन् । तत्कालीन राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्गको निर्माण गर्दा भारतले कडा विरोध गरेको थियो । त्यसले यो कुरा बुझेको थियो कि चीनसितको सम्बन्धको विस्तारले नेपालमाथिको उसको प्रभूत्व वा एकाधिकार कायम गर्ने नीतिमा आघात पुग्नेछ । त्यो वेला हामीले उनको त्यो कदमलाई समर्थन गरेका थियौँ ।
ओलि सरकारले भारतीय दवावका वावजूद त्यो प्रक्रियालाई धेरै अगाडि बढाएको थियो । जस्तै कि चीनसितको पारवाहन सन्धी, नेपालमा पेट्रोल र ग्यासको अन्वेषण गर्ने सन्धी, नेपालको उत्तरमा कैयौँ नाकाहरू खोल्ने सन्धी, नेपालमा तिब्बतबाट काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गको निर्माण सन्धी आदि । हामीले ओलि सरकारका ती सबै कदमहरूको समर्थन गरेका थियौँ । तर भारतको प्रयत्न प्रथमतः त्यस प्रकारका कुनै सन्धी हुन नदिने वा भए पनि तिनीहरूलाई कार्यान्वयन हुन नदिनेतर्फ नै हुन्छ । विभिन्न सरकारहरूमाथि दवाव दिएर वा नेपालको प्रशासनलाई उपयोग गरेर त्यसले त्यस प्रकारका उद्देश्यहरू पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दछ । नेपालको कुनै पनि सरकारले— अहिलेको ओलि सरकारले पनि – भारतको त्यस प्रकारको नीति प्रति सम्झौतापरस्त वा दब्बू नीति अपनाएमा नेपालका लागि त्यसका कैयौँ दूरगामी दूष्परिणामहरू हुन सक्दछन्, जसमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता समाप्त हुने कुरा पनि सामेल छ । तर हामीले आशा गर्दछौँ, अहिलेको वाम पक्षीय सरकारले त्यस प्रकारको गल्ती गर्नेछैन ।
देशको एउटा अत्यन्त ठूलो र गम्भीर समस्या भ्रष्टाचारको हो । त्यसलाई निवारण नगरिकन देशको विकास सम्भव छैन । सरकारले त्यसमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने छ वा भ्रष्ट र नोकरशाही प्रशासन संयन्त्रद्वारा स्वयं सरकारको नियन्त्रण हुनेछ ? हालैको सुन काण्डले पनि प्रशासन र प्रहरीसमेत भ्रष्टाचारमा कति धेरै मुछिएको छ ? त्यो कुरा उदाङ्गो भएको छ । दिनदिनै सञ्चार माध्यमहरूले प्रकाशमा ल्याउने तथ्यहरूले पनि देशमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त छ ? त्यो कुरामाथि राम्ररी प्रकाश पर्दछ ।
सरकारका कैयौँ निर्णय वा सर्वोच्च अदालतका बारम्बारका आदेशहरूका बावजूत सिण्डिकेट हट्न सकेको थिएन । अहिले सरकारले देखाएको इच्छाशक्ति र दृढताले गर्दा केही दिनमा नै यातायातमा भएको सिण्डिकेट हट्यो । सरकारले त्यही प्रकारको इच्छाशक्ति र दृढता देखाए अन्यत्र पनि सिण्डिकेट वा भ्रष्टाचार हट्न वा न्यून हुन सक्दछ । तर यो स्पष्ट छ कि भ्रष्ट तत्वहरूले सजिलैसित पराजय स्वीकार गर्ने छैनन् । उनीहरू प्रकट वा गोप्य रूपले प्रतिआक्रमणमा उत्रने छन् । वास्तवमा देशको विकासका लागि त्यो निर्णयात्मक महत्वको लडाइ हुनेछ । त्यसमा कसको जीत हुनेछ ? त्यो देश, देशको विकास र स्वयं सरकारको भविष्यको लागि पनि निर्णयात्मक महत्वको प्रश्न हो ।